Yusuf Garaad: Halbeeg
Yusuf Garaad 14 August 2015 at 11:30
Fadlan aragtidaada ku reeb isla boggan. Mahadsanid.
shakata 14 August 2015 at 11:55
Yuusuf sxb warkaaga ma cadda, waxbaad madmadoobeysay ii is cadee mooshinka maa kula sax san mise ku qaldan waxa aad tiri dhaqso haloo kala tuuro ma waxey tahay madaxweynaha dhaqso haloo rido mise haloo daayo, ogoow ma ahi taageerayaasha madaxweynaha laakiin muwaadin u arka waxa socda iney yihiin wax ay dabada ka riixayaan daneystayaal ay reer puntland ugu horeeyaan.
Abdirahman Ali 14 August 2015 at 12:25
Salan sare mudane wariye yusuf garaad waxaa isweydiin mudan horta ma hayeen dan somaliyed waa villa somalia iyo golaha barlamaanka wax ka ma jiraan umada ssomaliyedwaxa faaiidaya ama khasaaraya waa guruubyo iyo shakhsiyaad hadalkaaguna ma cada oo waxaan filayaa waxaad ka mid noqon kuwa khasaaraya ama faaiidaya
hassan nur 14 August 2015 at 16:02
Horta waxa musiiba ah in guriga ninkii lahaa / dhisay uu dumintiisa ugu hormaro ayado tariikhdu xusidonto beri
hassan nur 14 August 2015 at 16:03
Ahmed Hilowle 14 August 2015 at 13:03
Socod barad inuu kufaa dhacaa layaab malahan.
Ku dhawaad 20-sano waxay noogu dhamaatay Qori isku muquunin. Intaa oo kale ayaan isku muquuninaynaa mooshin dano badan laga leeyahay, meelo kala duwana laga soo abaabulay.
Wax degdeg ah majiraan marka laga hadlayo xal u helida xaalada Somalia. Every year is ninteen ninety one, difference is the tactics only.
Haada cirka maraysaa waxay ku dagi doontaa hadba kii aan kor eegin.
Mohamed Madar 14 August 2015 at 13:11
soomaaliya waxa ay ubaahantahay hoggaamiye daacad ah oo dadku soo doortaan hadii la waayo soomaaliya waxa ay ubaahantahay hoggaamiye gacan adag sidii Allaah ha u naxariistee General Maxamed Siyaad Barre wixii intaas ka soo haraa waa (Deerooy xaalkeenu ma iska daba wareegbaa?)
Feisal Mohamud 14 August 2015 at 13:12
Arrintan oo kale waxba kama dhihi karo hadaan ka dhahana ma aqaan mid aan eeda saaro wayo xasan wuxuu falay oo xumaana waa muuqdaan banaankayna yaalaan, nimankan leh mooshin baan keenayna ayagana waan ka dheregsanahay intey xumaantoodu gaarsiisan tahay umana malaynayo iney dan soomaaliyeed meesha u joogaan kana shaqaynayan sababahan cuskanayana waa badan yihiin, waxan isleeyahay waxay ku kala bixi doonaan waa waxay horay ugu kala bixi jireen oo ahayd in xasan jeebkiisa dib ugu noqdo kuwaan qayqaylinayana hade markay arkaan xasan oo xaaltamaya waa ku qasban yihiin iney dhinacooda hawsha ka dejiyaan, haddii ay heshiiyaan iyo haddii murmaanba sidiibaa shisheeyuhu dhalinyaradeena u leyn gabdhaheenana u fura xumeyn, sidii baa shisheeyuhu dhulkeena maamulo u dhisin una samaysan rag ayaga ka amar qaata kuna xiran, sidii baa dalkeenu gacanta uga sii bixin hadaan rag kale alle nagu bixin, marka aniga wax walba waxa igala qatarsan ayaga joogitaankooda oo gudinta daabkeeda si naloo gumeysto oo naloo duleysto ee ma arko barwaaqo ay kuwani noo horseedi karaan.
Ahmed Abtidon 14 August 2015 at 13:52
Salan sare kadib:
Waxaa hubaal ah oo inta waxgaradka ahi arkayaan in masiirkii ummadda Soomaaliyeed meel usan welgii gaarin ka laalaado. Wadanka waxaa jooga ciidamo shisheeye oo aan tiradooda la garaneyn aadna u hubeysan, u fiirso gobolada dhexe ila iyo Hiiraan iyo xaduuda kiilka dadkii waa la laynayaa ayado diyaarado loo adeegsanayo, welina ma maqlin dawlada ama Baarlamaanka oo ka hadlaya. Webigii Shabeelle waa la jaraya oo biyo xireen aya laga sameynayaa kiilka Baarlamaan iyo dawlad ka hadleysana ma maqal. Shabeelada Hoose Shacabkii aya lagu xasuuqaya ayadoo loo adeegsanayo magac argagixiso, Bay iyo Bakoolna warkoodaba daa. Jubooyinka ila iyo xaduudka Kenya waxaa ka socda xasuuq, kufsi iyo boob bahsan oo aan loo meel dayin, duqeyntuna waa u dheertahay, welina ma maqal Baarlamaan iyo dawlad ka hadlaya. Haddaba su’aashu waxay tahay mooshinkaani mecnihiisu waa maxay? Aniga aragtideyda waxay ila tahay in mudaneyaal baarlamaanka ku jira oo markoodi hore qurbajoog (Diaspora) aha reerohoodina N. America iyo Europe joogaan aya dawlada ruxruxayoo xoolo ka raba, waana isla kuwii raysalwasaarihii hore mooshinka ku riday. Anigoon cidna la safaneyn ayan waxaan u sheegaya kuwa mooshin ku noolka ahi inay dib u eegaan dib u dhaca siyasadeed ee mooshinku keenayo. Waxaan kaloo indin sheegayaa inaad ka hadashaan arrimaha cidamada shisheeye iyo waqtiga ay dalka ka baxayaan iyo la socodka dhibaatooyinka baahsan ee ay shacabka u geysanayaan.
Wwa billahi tawfiiq
Ahmed Abtidon 14 August 2015 at 13:57
Omar Abdullahi Omar 14 August 2015 at 13:59
Madaxweyne waqtiiga u haray uu fara ku tiris yahay, baarlamaanka raba inuu shaqo ka dhigto intuu qabsan lahaa howlaha faraha badan ee u yaalo, waxaan u arkaa socon weynayee aan oridno. Sanadka haray maku filan yahay in madaxweyne la rido, mid kalana la doorto, xukuumad cusubna lasoo dhiso, isla markaana ay september 2016da na gaarsiiyaan doorashooyin xaq iyo xalaal ah. Hadeysan dhaceynin, waan hubaa dhiciba meeysee, waxaan xildhibaanada keeyahay baarlamaanka cayaarta ka daaya.
mohamed ahmed 14 August 2015 at 23:01
Doodii jimcaha(BBC Somali 14/8/15) waxa iiga baxday in ay jiraan qabyo badan oo ah haayaddaha xeer ilaalinta,dajinta iyo fulinta qudheeda.
Garo'oo maxkmaddii dastuuriga ahayd ee xalinlahay marxaladan mabajiro.
Waana sababta sahashay xayntan ciyaaraysa siyaasadda waddanka in ay kubadda dhinacaydoonaan ulaadaan, inana ilkaha Ku dhowrno..
kenadiid mohamed khawi 15 August 2015 at 01:50
mudane yuusuf salaan sare arintu waa xadhig maran
Ahmed Mohamed 15 August 2015 at 08:44
Barlamaanka intiisa badan ma ahan dad qibrad u leh hoosha ay umada u hayaan taa waxay keentay in ay markasto ku daalaan waxa dhib u ah umada soomaaliyeed oo ay ka shaqeeyaan dana hooda qaska ah
Abdulkadir Hussein 15 August 2015 at 10:15
Waxaan ahay muwaadin wadani ah waxaa iga talo ah in M/weynuhu sheegay qaabka doorashada dhacayso laga wadatashto dowlada iyo shacabkaba taladana waxaa leh soomaalida dhamaan maamulada jira hadii mooshinka lagu cuuryaamiyo dowlada waxaan aamin sanahay in doorasha qaabkey u dhici doonto la wareegi doono Mr. KAY taasna waa xaqiiqda jirta wax u daneeyay dalka iyo dadkaba ma jiraan wadani wax la yiraahdana kuma jiro Dowlada. Si loo helo in soomaali guulaysato koleey M/weyne Hassan tagyee dabinka mooshinka shirqoolka shisheeye halaga baaqsado dalkana haloo daneeyo.
abdalle muuse 15 August 2015 at 11:30
waxaan qabaa fikir ahaan ama an ku tali lahay in madaxwaynuhu baneeyo kursiga wayo waxaa laga sugayay inu wax badan ka qabto Garsoorka oo hadda inta badan dadku ka sheegto, waxaa laga sugayay inuu afti dad wayne u qaado Dasturkan ku meel gaarka ah si looga boxo ku meel gaar Dastuur ah, waxaa laga sugayay inuu Dorasha qabto qof iyo cod ah waxa una leyahay ma dhici karto dorasha qof iyo cod ah. Marka awixii lay dirana ma qaban karo meshana wan sii jogaya waxay u muqata inaysan eheyn arin maan gal ah. Mudane Madaxweyne 3-dada sano Allahu kugu anfoco ayan dhihi lahaa.
Ismail Fiidow 15 August 2015 at 11:40
waaa caada dood madaxda dalka in ay abuuraan xiisad marka ay dhamaat ku dhawaato mudada shaqada xafiiska lkn waaa saa sheegtay mr garaad waxaaaa jiro dad ciyaarta kor kala socdo ,, somaliya somali baaaleh
Hassan Olow 15 August 2015 at 22:47
Hwa Jurong 15 September 2015 at 15:22